i-gvSIG 1.9 RC1, ilungele ukulanda - iGeofumadas
I-gvSIG 1.9 RC1, ilungele ukulanda
Agasti, 2009 I-GvSIG
Sekulungele landa i-gvSIG I-1.9 RC1, inguqulo yokuqala yokukhishwa kwabafundi (Ukukhishwa Ummeli) kusuka ku-1243 Build 313 ka-Agasti.
Ukulanda kuthathe isikhashana, ngoba ekuqaleni i-gvsig.org ibingasebenzi, kusuka lapho ukulandwa kwakhiwe khona, khona-ke inguqulo etholakalayo lapho uyivula futhi uyisebenzisa ivele njengefayela elonakele. Kepha ekugcineni nakhu, ukuthi sisebenzise, ​​sihlole, futhi sibike izingqinamba.
Okwamanje angizange ngithole imilayezo engavamile, ngiyisebenzisa ku-Acer Aspire One Netbook, futhi kubonakala sengathi ayibulali inkumbulo kakhulu, nakuba Akuwona umshini ophezulu wokusebenza. Ngiyawabona amaphrojekthi enziwe phambilini futhi ngiyethemba ukuthi ngizohlola ukusebenza kwawo kulezi zinsuku zokungcebeleka.
Ngokuqondene nokuthuthukiswa, kuningi, ngizozinika isikhathi sokuhlola, ekugcineni kungcono ngathi sonke ukuba sibe nencazelo ebonisa izidingo nezinkinga eziphakanyiswe umphakathi.
Iphaneli eseceleni lokuphatha ungqimba liyasebenza impela, kepha okwamanje ngihlangabezane nokungakhululeki okungenakulungiswa ngezendlalelo zokuqoqa. Esinye sezizathu zokuqoqa ukwenza ukwenziwa kuphumelele ngokwengeziwe, uphawu lokuhlanganisa luvumela ukufihla ukuboniswa kwezendlalelo ngaphakathi kweqembu.
-Kodwa njalo uma ushintsho olulula lusetshenziselwa iphaneli yokulawula isendlalelo kufana:
Layisha isendlalelo esisha
Shintsha ukufanekisela kwesendlalelo
Yenza iqembu elisha lezingqimba
Hlehlisa iqembu lezingqimba
Faka ungqimba ngaphakathi kweqembu elithile
Onke amaqoqo akhonjiswa ngendlela evulekile, okwenza kukhathaze uma uneziningana. Futhi angisitholi isizathu sokuthi kungani, kufanele kugcinwe ukuthunyelwa kokuthunyelwa.
Ukuphila kwalezi mathuluzi kusemphakathini, ngincoma ukuthi bayinciphise, bayidlale, bazame, bangayisebenzisi emsebenzini ohleliwe kodwa bahlanganyele ekuqinisekiseni kwayo, ngoba lokho kuxhomeke ekubeni nokwaneliseka okwedlulele kwisimo esitebeleni.
Lapha bayakwazi landa inguqulo futhi lapha ungabona uhlu lwezindaba.
I-Acer Aspire I-GvSIG OS
Thumela Previous«Langaphambilini I-Google Earth ithuthukisa indlela okwazisa ngayo isibuyekezo sakho
Post Next Lapho ukuthenga i-GPSOkulandelayo »